Semalt Expert Anoziva Nzira Yokudzivisa Kunyengedzwa Nenzira Dzokunyengera PakuIndia Kutumira Referrer Spam
Vashandisi vemabhiza akasiyana-siyana nevatengesi vanoshandisa Google Analytics mukutsvaga vatashanyi, kushanyira peji, nguva inoshandiswa pane imwe nzvimbo, uye kuti vashandisi vanobatana sei newavo (fomu kuendesa, video play, mabhadharo emashoko, e-commerce tracking). Makore maviri akapfuura, webmasters vakaona kushungurudzwa kwekutengesa kwemigwagwa mumabhuku avo eGoogle Analytics uye vakafunga kuti pfungwa dzenhema dzakanga dzichibva kunzvimbo dzisiri pamutemo uye dzisiri pamutemo uye nzvimbo dzakabatana. Spammers uye chikwata chetsvuku SEOs vakanga vashandisa nzira dzakasiyana-siyana dzokuwedzera mazita avo kumabhuku eGoogle Analytics kuitira kuti vanhu vashamise kuti chii chiri kuitika - solgar multivitamin v2000. Semalt Mutevedzeri Mukuru weVatengi vekubudirira, Julia Vashneva, anotaura kuti darodar.com inoramba ichitumira mazana kuzviuru zvevashanyi kune nzvimbo uye mazano eGoogle Analytics nhamba huru.
Dambudziko rakakura sei?
Vamwe webmasters vakatsanangura kuti nhema dzinoreva kutengesa mabhizimusi makumi mashanu ezana mashanu kubva mumatokari ose, izvo zvinoreva kuti inokwanisa kukwanisa kuongorora ma A / B nekuvandudza kushanduka pamwe chete nemamwe mapikicha ekutengeserana asina maturo kusvikira iwe uchivimba neGoogle Analytics kutora zvisarudzo zvakanaka. Kunyangwe paunobvisa kushanyira kwemafambiro, vese vanokanganisa vachapedza nzvimbo dzakadai se twitter.com, raddit.com, uye addons.mozilla.org kunyengedza nhamba yakawanda yevashandisi. Vakanyatsonzwisisa uye vanowedzera matricrics chaiwo kune vanotumira domains. Vatadzi vakuru mukutsvaga spam nde:
kutevera-don.top / referral
Paunocherechedza magwagwa kubva kune zvinyorwa izvi, mikana ndeyokuti spammers vakakunda nzvimbo yako.
Nzira yekubvisa sei shanduro spam uye mutengesi uipi muGoogle Analytics
Nzira yakanakisisa yokubvisa kutumirwa kwepamende uye chitengesi chakaipa ndechokushandisa mafikisi uye kusabvisa kutumira spam nguva dzose. Iwe unofanirwawo kuumba mafayiri ezvikwata zvepamusoro kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwewebsite nekuchengetedzwa. Uyewo, unogona kuisa sarudzo dzakagadzirwa uye unowedzera mitsetse yakatendwa inoteverwa nemazita echirongo anonyunyuta.
Unofanirwa kuyeuka kuti vasikana vanonyora nzvimbo dzakawanda zuva rega rega, saka kana iwe uchitarisa mabhuku maviri eGoogle Analytics, unofanira kufambisa chigadziro chekutsvaga chinetso cheGoogle chinonzi Auto Spam Filters kuti uve nechokwadi chekuchengetedza nekuchengetedza kwako. 10)
Zvinosuruvarisa, Google haina kuuya nemhinduro chero ipi zvayo yekutarisana ne referrer spam. Imwe nzira yekubvisa kutumira spam ndeyokushandisa zvinyorwa zvinowedzera kuGoogle Analytics account. Izvi zvingakubatsira kuti urege kubvisa spam kusvika pamwero.
Nenguva yakareba sokuvimbiswa kwemaitiro kunoratidza kuti ndiani ari kutumira data kune imwe UA-ID, zvinogona kubvisa kutumira spam. Sezvo Google Analytics inoshanda pasi pemamiriro ekutsvaga kweJS uye kuenzanisa, iwe unofanirwa kuchengeta ziso pavari mbiri sezvavanovimba nemasikirini asina kukodzera maklayiti anotumira zvikumbiro zveHTTP. Analytics Toolkit ndiyo chikwata chakanakisisa chevashandi ve webmasters vanoda kutsvaga kuve kwechokwadi kwezvinyorwa zvavo. Ichi chishandiso chakagadzirirwa ne-auto spam filter iyo inochengetedza kurega kutumira spam.